Olu na Douglas C-47 Skytrain
Olu na Douglas C-47 Skytrain 2 afọ 2 izu gara aga #1120
M etinyere Douglas C-47 Skytrain n'oge na-adịbeghị anya P3D V4 Windows 10. Kedu ụdị sim dị, m ga-eji obi ụtọ kwụọ ụgwọ maka ụdị a. Mana enweghị m ụda mkpọda, nfuli mmanụ ma ọ bụ kpọpụta oku. Onwere onye maara etu m ga - esi nweta ụda ndị a. Biko gbalịanụ ime ntụzịaka dịka pos, dịka m ji ekwupụta kọmputa.
Oge ike page: 0.188 sekọnd